Nzira yekukurumidza kuenda kuchikafu: Fraport iri kuyedza Yoordi, basa idzva rekuodha chikafu, kuFrankfurt Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Nzira yekukurumidza kuenda kuchikafu: Fraport iri kuyedza Yoordi, basa idzva rekuodha chikafu, kuFrankfurt Airport
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo yedhijitari Yoordi system, inogadziridza yega-yekugadzirisa mhinduro, inowedzera inowedzera ruzivo rwevatakurwi
Iyo Yoordi yekuzvimiririra-yekugadzirisa mhinduro yakanyatsogadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvevafambi.
Mufambi anotarisa kodhi yeQR, anodzidza menyu yeresitorendi iri kutora chikamu, odha, obva abhadhara zvisina kuonana.
Pakati pechikamu chekuchaira, iko kunyorera kunogona kubviswa kuti zvive nani kusangana nezvinodiwa uye zvinotarisirwa nevatengi nemaresitorendi.
Vatakuri nevashanyi pa Frankfurt Airport izvozvi vanogona kushandisa mafoni avo kuti vagadzirise zvirinani uye vabhadhare zvekudya nezvinwiwa kubva kumaresitorendi akasiyana - vachitora mukana weiyo "nzira yekukurumidza kuenda kuchikafu".
Iyo Yoordi yekuzvimiririra-yekugadzirisa mhinduro yakanyatsogadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvevafambi. Munhu anofamba anotarisa QR kodhi, anodzidza menyu yeresitorendi iri kutora chikamu, odha, obva abhadhara zvisina kuonana. Iko hakuna kudikanwa kwekutora app kana kunyoresa. Iyo odha inogona kuzotorwa mumugwagwa wekutsanya weresitorendi. Izvo zvinodiwa kuti zvive nyore, zvisina basa kushandiswa ndeyekugadzikana kweInternet kubatanidza, kuodha mapeji mumitauro yakawanda, uye dzakasiyana siyana dzekunze dzakakurumbira modhi dzekubhadhara.
Izvozvi zvakare zvakare zvinokwanisika kudya pawakagara muresitorendi mukati meimwe ematemu paFrankfurt Airport, nemusiyano wekuti izvozvi chikafu chinogona kurongedzwa zvisina kuonana. Iwo maseva anounza chikafu patafura.
"Ichi chirongwa chekuchaira chiri kutitendera isu nekukurumidza uye nenzira inoshandisika kushanda nemaresitorendi edu kuti tione kuti Yoordi anogona sei kuvandudza ruzivo rwevaenzi," akadaro Daniel Gemander, Fraport AG anoverengera maneja account account yezvikafu nezvinwiwa. Vatengesi vakasiyana siyana vari kuyedza mhinduro iyi muPier A yeTerminal 1. Munguva yechikamu chemutyairi, iko kunyorera kunogona kugadziridzwa kuti zviite zvirinani uye zvinotarisirwa nevatengi nemaresitorendi, pamwe mukana wekuwedzera zvimwe zvinhu.